Hurumende Ichapa Mamiriyoni Makumi Kuvarimi Vekumapurazi Madiki
VaMashakada vati mari iyi ichapihwa kuvarimi ava ne Grain Marketing Board, kasi vari kuda kuti GMB isaita zvematongerwe enyika nemari iyi.
Hurumende inoti yaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemashanu emadhora, iyo ichabatsira varimi vari kushaya mari yekutenga mbeu, fotereza nezvimwe zvinodiwa mumwaka wekurima usati watanga.
Gurukota rezvekurongwa kwehupfumi, vaTapiwa Mashakada, vari kuti pamari iyi, mamiriyoni masere emadhora achapihwa vanhu vanosvika zviuru zana, imwe yacho inoita makumi maviri emamiriyoni emadhora, ichapihwa varimi vemumaruwa, kotiwo mamiriyoni gumi nemanomwe emadhora, ichapihwa varimi vekumapurazi madiki.
VaMashakada vati mari iyi ichapihwa kuvarimi ava ne Grain Marketing Board, kasi vari kuda kuti GMB isaita zvematongerwe enyika nemari iyi. VaMashakada vaudza Violet Gonda we Studio 7 kuti kunyange hazvo mari iyi iri shoma, ichabatsira zvikuru varimi sezvo vanga vasina mari iyi.
Hurukuro naVa Tapiwa Mashakada